Umaki: ukukhuthaza | Martech Zone
I-Psychology ne-ROI Yombala
NgoLwesihlanu, ngoJuni 5, i-2020 NgoMgqibelo, Juni 6, 2020 Douglas Karr
Ngingumuntu othanda i-infographic yombala… sesivele sishicilele ukuthi ubulili buhumusha kanjani imibala, umbala, imizwa kanye nokufaka uphawu lwentengiso nokuthi imibala iyayithinta indlela yokuziphatha kokuthenga. Le infographic ichaza i-psychology kanye nembuyiselo ekutshalweni inkampani engayithola ngokugxila emibala abayisebenzisayo kulo lonke ulwazi lwabo lomsebenzisi. Imizwelo evezwe ngombala isuselwa kakhulu kokuhlangenwe nakho komuntu siqu kunalokho esitshelwa ukuthi kufanele bakumele. Umbala obomvu unamandla
Isayensi Yokumaketha Okubukwayo
NgoMgqibelo, Ephreli 14, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Kule nyanga sinezitho zokuthwebula izithombe ezi-2 namakhasimende, ividiyo ye-drone, nevidiyo yobuholi bokucabanga… konke ukwenza amasayithi amaklayenti ethu nokuqukethwe. Ngaso sonke isikhathi lapho sishintshanisa ama-stock footage namavidiyo kumasayithi amakhasimende bese sikubeka ngezithombe zenkampani yabo, abasebenzi babo, namakhasimende abo… kuguqula isayithi, futhi ukuzibandakanya nokuguqulwa kuyanda. Ngenye yalezo zinto ezicashile esingazikhombi lapho sibona isiza, kepha